Fikambanan’ny ben’ny tanana : Hifanohana amin’ ny fitondrana amin’ny fampandrosoana -
AccueilRaharaham-pirenenaFikambanan’ny ben’ny tanana : Hifanohana amin’ ny fitondrana amin’ny fampandrosoana
Fikambanan’ny ben’ny tanana : Hifanohana amin’ ny fitondrana amin’ny fampandrosoana
Nanomboka androany ary haharitra 3 andro ny fotoam-pivorian’ny ben’ny tanana anatin’ireo renivohim-paritany enina miampy ireo kaominina manana sata manokana hahitana Nosy be,ste marie, taolagnaro zay ao andrenivohitr’I betsimisaraka no hanatanterahana izany. Nanotrona sy nandray fitenenana nanokatra izany fivoriana izany ny praiministra lehiben’ny gouvernemanta zay nananatra ireo ben’ny tanana sy nampihavana ny samy hafa loko politika ihany koa. Nandritra ny fandraisam-pitenenan’ny praiministra no nilazany fa taratry ny fampihavanana tena izy ny firaisan-kina asehon’ireo ben’ny tanana ireo , satria dia nampiraisin’ny fitiavana fampandroso izy ireo. Nomarihin’ny praiministra ihany koa fa tsy maintsy mifampiankina ny fitantananana ny tanàna sy ny fanjaka foibe satria eo ny fanohanana ara bola na ihany koa ara tsaina. Anisan’ny nampihavaka ity fampihavanana ny samy hafa foronana zay notanterahina tao toamasina ity ny fifandraisan-tanana sy ny fifanorohana mendrika fifamelana teo amin’ny minisim-panjakana misahana ny fanajariana ny tany sy ny tetik’asan’ny filoha Narison Rafidimanana sy I Lalao Ravalomanana ben’ny tanana Antananarivo.
Mikasika ny fomba fifampitondrana eo amin’ny filan-kevitra monisipaly sy ny ben’ny tanana kosa, tao aorian’ny taraina nataon’ny ben’ny tanana sasany amin’ny fanonganana ny ben’ny tanana amperinasana , dia mazava ny nambaran’ny praiministra. ‘’ efa voalazan’ny lalàna mifehy ny fifidianana fa ireo nirotsaka ho fidiana zay manana vato be indrindra no anisan’ny anjara toerana anatin’ny filan-kevitra monisipaly’’ noho izany dia tsy manana fahefana hitsabaka amin’izany ny praiministra. Ankilany kosa dia nisy ny lesona nomen’ny praiministra ireo ben’ny tanana nanatrika azy ireo amin’ny tsy tokony hanaovana anao amboletra amin’ny fanapahan-kevitra satria dia mbola mandalo fanapahana izany. Ankilany kosa ireo mpanolo tsaina dia tsy tokony anao volo manoha randrana hoy ny praiministra sady dia ny fifanakalozan’kevitra ihany no zava dehibe
Tao aorian’ny fivoriam-be notontosain’ireo ben’ny tanana ihany koa no nanambaran’izy ireo ny fahavonana hiara iasa amin’ny fanjakana foibe. Izany dia atao anatin’ny fifampiresahana malalaka sy madio hoy ireo ben’ny tanana. Ankoatra izany ny fananganana ny trano ben’ny ben’ny tanana zay ho atao eto Antananarivo etsy andohalo.
Mazava izao ny tanjon’ny fanjakana foibe fa dia ny firosoana hatrany anatin’ny fampandrosoana indrindra ny eny hifotony, marik’izany ny fihetsika nasehon’ny praiministra lehibe’ny gouvernemanta androany. Tsy nisy ny fanavahana na dia efa nisy tamin’ireo ben’ny tanana ireo aza no nanao tsinontsinona sy nanao teny mahery ireo mpitondra fanjakana. Ny fifanampiana hijerena ny tombontsoan’ny vahoaka malagasy no tiana himasoana , ka tsy hijerena loko na iza na iza. Ny hirarihana dia tsy hisy ny hivady belirano amin’izao ezaka lehibe efa nirosoan’ny mpitondra fanjakana izao.
Nitondra ny heviny mahakasika ny fahalanian’ireo volavolan-dalàna telo fehizoro momba ny fifidianana ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier, omaly. Tamin’izany indrindra no nanambarany fa nandresy ny demokrasia tamin’ny fandanian’ireo solombavambahoaka ny lalàm-pifidianana. Eny, fa na nisy ...Tohiny